खाएको कुरा नपचेर हैरान हुनुभएको छ ? घरमै यस्ता प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, आउँनुस् जानाैँ के रहेछ - ज्ञानविज्ञान
पाचन प्रणालीमा गडबडी भई खाना नपच्ने समस्या हुनुलाई अपच भनिन्छ । कुबेला भोजन गर्ने तथा एउटा खाना नपच्दै अर्को खानेकुरा खाइयो भने राम्रोसँग पच्दैन । यस्तै कुनै बेला धेरै चिल्लो या मसलेदार खाना खानाले पनि अपच हुन्छ । तर यसबाहेक अन्य कारण पनि हुन्छन् । जसले अपचको समस्या ल्याउँछ ।
याे राेग लागेकाे बेला भाेक लाग्दैन, जीउ भारी भएजस्ताे हुन्छ, अमिलाे डकार आउँछ, छाती पाेलेकाे जस्ताे हुन्छ, उल्टी हुन्छ, पेट फुल्छ, टाउकाे भारी हुन्छ, मुटुकाे धडकन बढ्छ, शरीर आलस्य हुन्छ, जिब्राेमा फाेहाेरकाे पत्र लाग्न थाल्छ । जब राेग पुरानाे हुन्छ, तब पेटमा ग्यास बढ्ने समस्या देखापर्छ ।
भारी खाना, धेरै खानु, कुसमयमा खाना खानु, राम्राेसँग नचपाइकन खानु, धेरै मानसिक परिश्रम गर्नु, शारीरिक परिश्रम नगरी आराम गर्नु, चिया, कफी, रक्सी, चुराेट धेरै मात्रमा सेवन गर्नु, बासी खाना या अत्याधिक पिराे मसालेदार खाना खानु, राति अबेरसम्म नसुती बस्नु, डर, रिस ईष्या, मनमा ग्लानि हुनु, मन नलागेकाे खाना जबर्जस्जी खानु, खाना खाइसकेछि धेरै पानी पिउने गर्नु आदि ।
१. धेरै बासनादार, बासी, आधा पाकेकाे खाना नखाने ।
सूर्याेदय हुनुभन्दा अगाडि नै उठेर घुम्न जाने र शारीरिक ब्यायम गर्ने ।
सधैँ नुहाउने ।
बिहान खाली पेटमा सधैँ एक गिलास पानी पिउने ।
खाना खाइसकेपछि कफी पिउनु पर्छ, जसले चित्त प्रशन्न पार्छ र स्फुर्ती अाउँछ ।
राती धेरैबेरसम्म नबस्ने ।
खाना छिटाेछिटाे नखाने र बीचबीचमा पानी पनि नपिउने ।
सम्भाेगमा धेरै सहभागी नहुने ।
मानसिक उत्तेजना नहाेस् भन्नकाे लागि छिटाे-छिटाे, हडबडीमा काम नगर्ने ।
रिसाउन छाेड्ने ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइका छाै
अपचले निम्त्याउने केहि रोगबारे जानिराखाैँ
Don't Miss it स्मार्ट कसरी बन्ने ?
Up Next सावधान ! यस्ता गलत बानीले तपाइकाे दिमाग कमजोर बनाइरहेकाे छ, जान्रुहाेस्